Spain Archive - Gool FM - page 3	twitter
LA LIGA: Kooxda Real Madrid oo hoggaanka horyaalka Barcelona kaga qabatay shan dhibcood oo saafi ah kaddib guul ay ka soo gaartay Athletic Bilbao… + SAWIRRO
(Bilbao) 18 Maajo 2017 – Kooxda Real Madrid ayaa shan dhibcood oo saafi ah kaga qabatay hoggaanka horyaalka La Liga naadiga Barcelona, kaddib markii ay guul 2-1 caawa ka gaartay Athletic Bilbao.
Real Madrid oo marti ahayd ayaa goolka la horreysay waxaana Athletic Bilbao ka dhaliyey 25’daqiiqo Karim Benzema, kaddib baas hagaagsan oo uu ka helay Cristiano Ronaldo, kulanka ayaana lagu kala nastay 1-0 ay ku gacan sarreysay Real Madrid.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Athletic Bilbao 
UEFA oo shaacisay waqtiga la ciyaari doono kulamada 8-dhamaadka Champions League
(Nyon) 17 Maarso 2017 Xiriirka kubadda cagta yurub ee UEFA ayaa shaaciyay waqtiga rasmiga ah ee la ciyaari doono kulamada koobka horyaalada yurub.
Isku aadka oo la sameeyay goor hore ayeey isku aadeen kooxaha Barcelona vs Juventus, Bayern vs Real, Atletico vs Leicester, Dortmund vs Monaco.
UEFA ayaa baahisay in kulamada lugta hore la ciyaari doono 11 iyo 12 ee bisha April halka kulamada lugta labaad la ciyaari doono 18 iyo 19 ee isla bishaas.
Kooxaha ayaana isku arki doona sidaan:
11-April-2017: Juventus vs Barcelona, 
DEG DEG: Bayern Munich vs Real Madrid, Isku aadka Wareega 8-da ee Champions League oo la sameeyay
(Nyon) 17 Maarso 2017 Xiriirka kubadda cagta yurub ee UEFA ayaa sameeyay isku aadka wareega 8-dhamaadka koobka horyaalada yurub.
Isku aadka waxaa ka soo baxay kulamo badan oo xiiso leh, waxaana isku dhacay kooxaha Bayern Munich iyo Real Madrid.
Sidoo kale kooxaha Atletico Madrid iyo Leicester City ayaa isku beegmay halka Barcelona ay ku aaday kooxda reer talyaani ee Juventus.
Isku aadka oo dhamaystiran:
-Atletico Madrid vs Leicester City.
-Borussia Dortmund vs AS Monaco.
-Bayern Munich vs Real Madrid.
-Juventus vs Barcelona.
Maxaa keenay hoos u dhaca Cristiano Ronaldo? Raul ayaa ka jawaabaya
(Madrid) 17 Maarso 2017 Halyeeyga kooxda Real Madrid ee Raul Gonzalez ayaa daaha ka qaaday sababta dhabta ah ee ka danbaysa hoos u dhaca ku yimid qaab ciyaareedka Ronaldo.
Xiddiga reer Portugal oo sanadkii hore Champions League iyo Euro u qaaday kooxdiisa iyo xulkiisa ayaa ku guulaystay intabadan abaal marinadii la bixiyay sanadkii dhamaaday ee 2016.
Laakiin Ronaldo ayaa laga dareemayaa hoos u dhac wayn, Raul ayaa sheegay in laacibka uu xooga saaro gool dhalis iyo orodkiisii badnaa oo yaraaday ay sabab u tahay 
Ivan Rakitic oo ku kalsoon in Messi iyo Iniesta ay saxiixayaan heshiis cusub
(Barcelona) 17 Maarso 2017 Laacibka qadka dhexe ee Barcelona Ivan Rakitic ayaa ku kalsoon in Andres Iniesta iyo Lionel Messi ay kooxda u saxiixayaan heshiis cusub.
Qandaraaska labadaan laacib ayaa dhacaya 2018, waxaana hakad galay wadahadaladii ay ku saxiixayeen heshiiska cusub, taas oo mugdi galisay mustaqbalkooda kooxda reer Spain.
Rakitic ayaa sheegay in Messi uu Barcelona ku haysto saaxiib fiican oo ah Luis Suarez kaas oo ay wada doonayaan inay iska garab ciyaaraan mudo dheer, wuxuuna yiri xili uu la hadlayay Mundo Deportivo:
Camp Nou oo lagu dhajiyay sawirkii caanka noqday ee Lionel Messi kulankii PSG…EEG SAWIRKA
(Catalonia) 17 Mar 2017. Barcelona ayaa guul taariikhi ah oo aan ebid horey loo dhigin ka gaartay kooxda PSG kaddib markii ay uga adkaatay 6-1 iyadoo lugtii hore ee lagu soo ciyaaray Faransiiska looga soo adkaaday 4-0.
Lionel Messi ayaa kulankaa laga qabtay SAWIR durba caan noqday isagoo la dabaal degaya taageerayaasha Camp Nou iyadoo uu meel sare soo fuulay taageerayaashuna ay hoos dhoobnaayeen lugihiisa hoostooda.
Sawirkan caanka baxay ayaa lagu dhajiyay bannaanka garoonka Nou Camp isagoo soo dhaweyn doona taageerayaasha soo 
Siduu u arkaa kabtan Iniesta dib u soo laabashada Thiago Alcantara?
(Barcelona) 17 Maarso 2017 Kabtanka Barcelona ee Andres Iniesta ayaa ka hadlay wararka la xiriirinaya kooxdiisa dib u soo laabashada laacibkoodii hore ee Thiago Alcantara.
Agaasimaha dhanka ciyaaraha ee Barcelona ayaa la arkay isaga oo daawanaya kulankii Thiago Alcantara uu 2-da gool ka dhaliyay kooxda Arsenal, kulankii lugta hore ee wareega 16-ka koobka horyaalada yurub.
Andres Iniesta ayaa albaabka u furay dib u soo laabashada Thiago Alcantara kaas oo uu u arko laacib muhiim ah isla markaana sameeyay hormar badan.
“Thiago waa laacib ka soo baxay akadeemiyada 
Pepe iyo Varane oo markale ka maqnaanaya kooxda Real Madrid
(Madrid) 17 Maarso 2017 Tababare Zinedine Zidane ayaa markale ku qasbanaanaya inuu daaficiisa dhexe ka dhigo Ramos iyo Nacho Fernandez sida ay baahisay Marca.
Real Madrid ayaa barri u safri doonta kooxda Bilbao, waxaana la sheegay in Pepe uusan ka qayb qaadan tababarkii shalay ee ciyaartoyda kooxda.
Daafaca reer Portugal ayaa sameeyay tababar isaga u gooni ah kaas oo uu uga soo kabsanayo dhaawac soo gaaray, waxaana loo badinayaa inuu seego kulanka barri.
Sidoo kale Raphael Varane ayaa dib u bilaabay tababarka gaarka ah 
“Atletico Madrid ayaa ugu cad cad hanashada Champions League” – Chicharito
(Madrid) 16 Maarso 2017 Weerar yahanka kooxda Bayer Leverkusen ee Javier Hernandez Chicharito ayaa daaha ka qaaday kooxda ugu cad cad hanashada koobka horyaalada yurub ee xiliciyaareed kan.
Atletico Madrid ayaa xalay 0-0 lagashay kooxda reer Jarmal, laakiin waxay ku soo baxeen guushii 4-2 ee ay uga soo adkaadeen kulankii lugtii hore.
Chicharito ayaa sheegay in kooxdiisu ay la ciyaartay mid kamid ah kooxaha ugu cad cad hanshada koobka horyaalada yurub xiliciyaareed kan.
“Waxaan la ciyaarnay mid kamid ah kooxaha ugu fiican aduunka, sidoo kale 
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii barbaraha ku idlaaday ee dhexmaray kooxaha Atlético Madrid iyo Bayer Leverkusen ee Champions League
(Madrid) 16 Maajo 2017 – Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa xalay u soo baxday siddeed dhammaadka koobka horyaallada Yurub kaddib markii ay barbaro garoonkeeda Vicente Calderon kula gashay Bayer Leverkusen.
Atletico Madrid ayaa gaartay siddeed dhammaadka Champions League, inkastoo ay barbarahaas gool la’aanta ah Calderon kula gashay kooxda Bayer Leverkusen, balse kooxda tababare Diego Simeone ayaa shaqadeeda ugu badan soo qabsatay kulankii lugtii koowaad ee ka dhacay Jarmalka, waxayna Atletico Madrid ku soo baxday isku dar goolal gaaraya 4-2.